from $350 33 Pages MarketLine March, 2019 MTLN15923036
Understand the political system in Zimbabwe through analysis of key figures in the country and governance indicators.
Understand the economic situation in Zimbabwe through a balanced assessment of core macroeconomic issues.
Understand customer demographics in Zimbabwe through analysis of income distribution and the rural-urban split, as well as healthcare and education.
Understand the technological landscape in Zimbabwe through analysis of relevant laws and policies, as well as patents data.
The political landscape section discusses the evolution of the political scenario in Zimbabwe, as well as the country's economic, social, foreign, and defense policies. The section also discusses the country's performance according to World Bank Governance Indicators.
The economic landscape section outlines the evolution of Zimbabwe's economy, as well as the country's performance in terms of GDP growth, composition by sector (agriculture, industry, and services), fiscal situation, international investment position, monetary situation, credit disbursement, banking sector, and employment.
What is the outlook in Zimbabwe in terms of political stability, policies towards business, and the popularity of the government?
How does Zimbabwe perform in terms of GDP growth, its fiscal situation, international investment position, monetary situation, and employment?
How does Zimbabwe perform in terms of healthcare, income distribution, and education?
How does Zimbabwe perform in terms of technology-intensive sectors like IT, life sciences, and R&D expenditure trends?
Key developments January 2018-February 2019
Table 1: Zimbabwe - Key Facts, 2019
Table 2: Zimbabwe - Population by Gender (as a Percentage of the Total Population), 2018e
Figure 1: Map of Zimbabwe, 2018
Figure 2: Zimbabwe - A Timeline of Key Political Events
Figure 3: Zimbabwe - Head of State and Government, 2019
Figure 4: Zimbabwe - Political Composition in the House of Assembly (%), 2018
Figure 5: Zimbabwe - GDP Growth (%), 2008-2018e
Figure 6: Zimbabwe - GDP and GDP Growth Rate (Constant Prices), 2013-2023f
Figure 7: Zimbabwe - GDP by Sector (%), 2018e
Figure 8: Zimbabwe - Agricultural Output ($ Billion/%), 2013-2018e
Figure 9: Zimbabwe - Industrial Output ($ Billion/%), 2013-2018e
Figure 10: Zimbabwe - Services Output ($ Billion/%), 2013-2018e
Figure 11: Zimbabwe - Imports vs Exports ($ Billion), 2013-2017
Figure 12: Zimbabwe - Consumer Price Index and CPI-based Inflation (%), 2013-2023f
Figure 13: Zimbabwe - Unemployment (Millions/%), 2013-2023f
Figure 14: Zimbabwe - Major Religions (%), 2015
Figure 15: Zimbabwe - Healthcare Expenditure ($ Billion/%), 2011-2017
Figure 16: Zimbabwe - Internet Users and Penetration (Millions/%), 2013-2018e